Amasu Wokumaketha Okuqukethwe we-7 Agqugquzela Ukuthembana Nokwabelana | Martech Zone
Okunye okuqukethwe kuvame ukwenza kangcono kunabanye, ukuwina amasheya amaningi nokuguqulwa okuningi. Okunye okuqukethwe kuvakashelwa futhi kwabelwane ngakho kaninginingi, kuletha abantu abaningi nabasha kulo mkhiqizo wakho. Ngokuvamile, lezi yizicucu eziqinisekisa abantu ukuthi umkhiqizo wakho unezinto ezinhle ongazisho nemiyalezo abangathanda ukuyaba. Ungabuhlakulela kanjani ubukhona be-inthanethi obukhombisa amanani azuzela ukuzethemba kwabathengi? Khumbula le mihlahlandlela lapho udala isu lakho lokumaketha okuqukethwe:
Khombisa Ubuchule Bakho
Enye yezindlela ezinhle kakhulu zokunqoba ukwethenjwa kwamakhasimende okukhombisa ukuthi, uma bekhetha wena, bazoba sezandleni ezinekhono. Dala okuqukethwe okukhombisa ukuthi ujwayelene kakhulu nomkhakha wakho. Bhala okuthunyelwe ngemikhuba emihle yakamuva. Chaza ukuthi kungani enye indlela ingcono kunenye. Dala i-athikili yohlu ekhombisa amaphutha ajwayelekile nokuthi ungawagwema kanjani. Lezi zinhlobo zezicucu zibonisa amathemba akho wokuthi uyazi ukuthi ukhuluma ngani nokuthi ungathenjelwa ukuthi uzobenzela kahle.
Dala Okuqukethwe Okuphendula Izidingo Zabafundi
Lapho abantu beqala ukubheka okuqukethwe kusayithi lakho, imvamisa kungenxa yokuthi banombuzo othile abafuna ukuphendulwa kuwo. Dala okuqukethwe okungaphendula imibuzo yakho yamathemba futhi kungabasiza ukuthi banqume ukuthi bangaxazulula kanjani izinkinga zabo. Isibonelo, kungenzeka ukuthi umuntu obhekene nezinkinga ngesiphephetha-moya sakhe kungenzeka ukuthi afunde ngezizathu ezijwayelekile zokuthi i-air conditioner iyeke ukushaya umoya opholile ngaphambi kokuthi aqale ukuzama ukukhetha inkampani ye-HVAC ukuthi iphume izosebenzela uhlelo lwayo . Ngokuba nguwe ozophendula umbuzo wakhe, ukhombisile ubuchwepheshe bakho nokuzimisela ukumsiza odabeni lwakhe.
Abantu kungenzeka bathembe umkhiqizo onikeza izimpendulo zemibuzo ejwayelekile ngendlela eqondile futhi ewusizo, ngaphandle kokwenza umqulu ngamunye udabule amathani wokuqukethwe ukuthola okuncane abakudingayo. Ngokunikeza amakhasimende akho lokho eza endaweni yakho ukuzokuthola, ungenza kube nokwenzeka ukuthi, uma kwenzeka edinga umkhiqizo noma insizakalo, eyakho yiyo ezokhetha yona.
Ungabatsheli Nje; Babonise
Qiniseka ukuthi ungabhekhaphu noma iziphi izimangalo ozenzayo. Isibonelo, ungasho nje ukuthi unamanani ancintisana kakhulu endaweni yangakini. Dala ishadi noma i-infographic eqhathanisa izilinganiso zakho nezimbangi zakho. Yenza isipele izimangalo zokwaneliseka kwamakhasimende okuphezulu ngezingcaphuno ezivela kubufakazi obuvela kumakhasimende ajabule. Isimangalo esingenalutho ngaphandle kwanoma yini ukusekela kungenzeka singanakwa noma, okubi nakakhulu, ukwenza umfundi azizwe esolisa. Uma ukwazi ukuxhasa zonke izimangalo ozenzayo ngobufakazi, kukhombisa ukuthi uthembekile nokuthi uyakufanelekela ukwethenjwa kwabo nebhizinisi labo.
Bonisa Abafundi Ukuthi Ubalalele
Imidiya eku-inthanethi inenhlalo ngokwemvelo. Sonke sinamabhokisi ethu ensipho, noma ngabe izilaleli zethu ziyiqembu lezinkulungwane noma isiyingi esincane somndeni nabangane. Uma uthumela ku-inthanethi, wenza ingxoxo. Khombisa amathemba akho namakhasimende owalalelayo futhi ukhulume.
Gada iziteshi zakho zenhlalo ngokubalulwa komkhiqizo wakho. Funda imibono kumabhulogi akho. Bona ukuthi abantu bajabule ngani futhi, okubaluleke kakhulu, ukuthi yini abangenayo. Uma kufanelekile ukwenza kanjalo, bhekela ukukhathazeka kwamakhasimende kubhulogi yakho noma eziteshini zakho zokuxhumana nabantu. Lapho abantu bebona ukuthi umkhiqizo uyaphendula, maningi amathuba okuthi bazizwe bephephile ngokuphathisa lelo bhizinisi ngebhizinisi labo.
Yethula Ubufakazi Bomphakathi
Lapho sibona ukuthi abanye, noma ngabe bangabantu esibaziyo uqobo noma cha, babe nokuhlangenwe nakho okuhle ngophawu lomkhiqizo, maningi amathuba okuthi siwathembe amazwi abo kunezimangalo zomkhiqizo uqobo. Khuthaza abasebenzisi ukuthi bashiye izibuyekezo futhi bacaphune lokhu kokuqukethwe kwakho uma kufanelekile. Lawa mazwana avela kumakhasimende wangempela angenza abanye bazizwe bekhululeke kakhudlwana ukuthatha igxathu nokwenza ibhizinisi ngomkhiqizo wakho.
I-BuzzSumo ihlaziyiwe Okuthunyelwe ngegciwane kuka-2015 kumanethiwekhi afaka i-Twitter, Facebook ne-LinkedIn. Futhi, okunye okudume kakhulu yilokho obekuqukethe okuthile okuthinta imizwa. Abantu basabele kahle kokuthunyelwe okubandakanya izindaba ezijabulisayo nezakhayo ngabantu. Futhi kungenzeka babelane ngezindaba ezazinempikiswano noma ezishaqisayo ngandlela thile.
Lapho udala okuqukethwe kwebhizinisi lakho, cabanga ngendlela ukunikezwa okuthile okungenza ngayo abafundi bakho bazizwe. Ingabe kungenzeka bathande noma bahlekise? Ngabe bazozibandakanya nabantu endabeni? Lezi zinhlobo zokuphendula zenza iminikelo yakho yokuqukethwe izwakale ifaneleka kakhulu futhi ingeyakho. Lezi yizinhlobo zezindaba okungenzeka zithole imibono nokwabelana.
Ngabe umkhiqizo wakho usebenza nabathengi ngabodwana noma amabhizinisi amancane? Ngabe akhona amakhasimende athi imikhiqizo noma izinsizakalo zakho zibe wusizo olukhulu kubo? Ngabe unamakhasimende ahlukile ngokwabo? Cabanga ukudala okuqukethwe kwevidiyo noma kwebhulogi mayelana nezindaba zalawo makhasimende. Ukugxila kumuntu ngamunye kunikeza abantu umuntu abazwana naye. Ngeke babone umkhiqizo wakho ezimpilweni zakho uma nje ubanikeza uhlu lwezici. Ngokukhombisa ukuthi isize kanjani noma yathuthukisa imisebenzi yosuku lomuntu yosuku, ungasiza amakhasimende akho abone ukuthi umkhiqizo wakho ungabasiza kanjani.
Lapho okuqukethwe kwakho kwabelwana ngakho, uthola umkhiqizo wakho phambi kwamakhasimende angaba khona okungenzeka ukuthi abengakakuboni. Futhi, uthola ubufakazi bezenhlalo obuvela ekunconyweni komuntu siqu. Iningi labantu liqonda ngokweqile uma kukhulunywa ngokuqukethwe abelana ngakho. Ngemuva kwakho konke, leso sabelo ukuqinisekiswa okusobala kokuqukethwe kwakho. Ngokwakha okuqukethwe okuvusa inzalo nemizwa ngenkathi kukhombisa ukuthi umkhiqizo wakho ukufanele ukunakwa nokwethenjwa kwabo, ungakhuphula amasheya akho, wakhe ubudlelwano obuqinile futhi ubone inzuzo yokuqukethwe okuguqukayo.
Tags: Ukukhangisa Okuqukethweukwabelana kokuqukethweimizweloubuchwephesheukwandisa amasheya omphakathikhulisa ukwethembanakhuthaza ukwethembanaukulalelasiqusharebaboniseubufakazi bezenhlalakahlebatsheleukwethemba
Ikusasa Alisebenzi Futhi Alikaze Libe Khona
I-Scoutsee: Yenza imali ngezokuxhumana zomphakathi ngesitolo sangaphambili esihambisanayo